Arenti Cloud inorekodha zviitiko zvechiitiko kana kufamba kwekufamba kuchikonzerwa, iyo clip clip ichave kusvika pamaminitsi matatu (zvinoenderana nemamodeli). Uchave nemwedzi wekushandisa sevhisi iyi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 2.99
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 4.99
Mazuva makumi matatu （Vhidhiyo nhoroondo） $ 15.99
Arenti Cloud inorekodha zviitiko zvechiitiko kana kufamba kwekufamba kuchikonzerwa, iyo clip clip ichave kusvika pamaminitsi matatu (zvinoenderana nemamodeli). Uchave nemwedzi mitatu yekushandisa sevhisi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 8.37
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 14.37
Mazuva makumi matatu （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 47.37
Arenti Cloud inorekodha zviitiko zvechiitiko kana kufamba kwekufamba kuchikonzerwa, iyo clip clip ichave kusvika pamaminitsi matatu (zvinoenderana nemamodeli). Uchave uine 1 gore rekushandisa sevhisi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 30.00
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 50.00
Mazuva makumi matatu （Vhidhiyo nhoroondo） $ 160.00
Arenti Cloud zvakare inopa yakazara-zuva rekurekodha sarudzo, kurekodha 24/7 (kunze kwebhatiri kamera uye vhidhiyo bhero). Uchave nemwedzi wekushandisa sevhisi iyi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 3.99
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 6.99
Mazuva makumi matatu （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 21.99
Arenti Cloud zvakare inopa yakazara-zuva rekurekodha sarudzo, kurekodha 24/7 (kunze kwebhatiri kamera uye vhidhiyo bhero). Uchave nemwedzi mitatu yekushandisa sevhisi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 11.37
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 20.37
Mazuva makumi matatu （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 65.37
Arenti Cloud zvakare inopa yakazara-zuva rekurekodha sarudzo, kurekodha 24/7 (kunze kwebhatiri kamera uye vhidhiyo bhero). Iwe unenge uine 1 gore rekushandisa sevhisi iyi.
3 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 40.00
7 - Zuva （Nhoroondo yevhidhiyo） $ 70.00
Mazuva makumi matatu （Vhidhiyo nhoroondo） $ 220.00
Arenti Kuedza Kwekuchengetedzwa Kwemukati
Arenti anogara achikoshesa kukosha kwechengetedzo yevatengi. Sezvo Arenti akazvarwa, isu tinotora kuyedza pazvinhu zvese zvechikamu chekuvandudza, kusanganisira chishandiso, app, uye server.
Kamera yedu yakagadzirirwa neyakavanzika maitiro uchishandisa algorithm AES-128. Yese data ichave yakavharidzirwa, kusanganisira mameseji echiitiko, ekuraira mirairo, kutenderera kwehupenyu kuona, kuchengetedza gore, uye kuchengetedza kwenzvimbo.
AES-128 ndeye yakakwira mwero uye yepamusoro chengetedzo encryption algorithm, inozivikanwa zvakanyanya neiyo indasitiri.
Makamera ese anotsigira yakavanzika maitiro. Vashandisi vanogona kumisikidza iyo on / off chimiro cheiyo lens. At off chinzvimbo, hapana data rinozotamisirwa kubva kuchinhu. Zvichakadaro, chikamu chemamodeli chine chekuvhara muviri basa, iro lenzi rinotenderera kumusoro. Izvi zvinoziva mhedzisiro yekuchengetedza zvakavanzika.
Mukati mekudyidzana kwakazara pakati pechigadzirwa, sevha, uye app, rese data kufambisa rinoitwa kuburikidza neHTTPS, inosimbiswa neSSS algorithm, inosanganisira kutenderera, meseji yechiitiko, uye yekuraira mirairo.
SSL ndiyo indasitiri standard yekutaurirana kwakachengeteka, iyo inogona kunyatso chengetedza iyo data kufambisa kunetiweki.
Isu tinowedzerawo kiyi yechokwadi pakufambisa kweP2P kunoshandiswa pakushambadzira, uyezve simbisa kuchengetedzeka kwedata.
Isu tinosarudza AWS sega redu rebasa rebasa. Yese sevhisi inovakwa kuburikidza neAWS, hapana mumwe mupi wegore seAWS ndiyo inonyanya kuzivikanwa indasitiri, yakanakisa sevhisi sevhisi yekuchengetedza uye kuchengetedzwa kwepachivande.
Kune vashandisi, iyo inonyanya kukosha data ndeye account account. Pane server, account account inonyorwa neAES-128.
Isu tinotumira maseva eAWS pasirese. Maseva matatu anowanikwa zvakasiyana muUS, Germany, neChina, mukushandira kumatunhu epasirese. Dunhu rega rega dhata richachengetwa chete kune inoenderana server.
Nhanho-nhanho sosi inoshandiswa kune Arenti App login. Kana mushandisi akagadzirisa account yekuremekedza kana kure kure kureka kunoitika, iyo kodhi yekusimbisa ichatumirwa kune maviri-nhanho ongororo.
Zvichakadaro, Arenti App inounganidza nharembozha zvakanyatso gutsa zvemunyika zvinodiwa nemutemo.